Ukumbiwa Kwisisongelo esibi kakhulu kwi-Crypto, kodwa i-PIVX isele iZiqendu ezintathu ngaphambili | PIVX
I-Cryptocurrency ineengxaki ezinzulu. Nsuku zonke, amanethiwekhi afana neBitcoin kunye neLitecoin ahlala ephakathi. Ukusebenza kwemigodi echanekileyo yezoshishino ezitshisa ngombane zibeke amandla okulawula amanethiwekhi ezandleni ezimbalwa. Abavukuzi ngabanye kufuneka bathembele kumachibi okumba amacembe ukuze bancintisane, kodwa amachibi asemigodini ngokwawo asebenza njengamandla ekuphambili kwenethiwekhi.
I-centralization ikhokelela ekungabikho kobuthathaka obukhulu kunye neengozi ezininzi zokuhlaselwa kwenethiwekhi. Ukugqitywa kweMigodi ngokukhawuleza kube yinkinga engaphezulu kwesisombululo, kwaye kunye neentsika ezide zentlalo zithetha ngokuchasene nazo. Enye i-cryptocurrency isebenza nzima ukwenza isisombululo sangempela kuzo zonke le micimbi. Le projekthi yiPIVX.
Kule nqaku siya kuhamba ngenye ingozi enkulu ekukhunjululeni kwezinto ezifana neBitcoin zijongene nazo, kunye nendlela iqela elilandela ngayo i-PIVX liye lafumana izisombululo ezintsha kuzo zonke.
Imayini yeBitcoin isebenzisa amandla amaninzi
Usenokuba uvile le ngxabano ngaphambili, kodwa i-Bitcoin imayini idla ipesenti enkulu kakhulu yehlabathi. Uqikelelo lwangoku lubonisa ukuba imisebenzi yokumbiwa kwemigodi ngoku idla umbane okanye ngaphezulu kombane ngaphezu kwesizwe sonke saseDenmark.
Oku kubangelwa ukuba imayini yeBitcoin ifezekiswe ngeekhompyutheni zamandla ombane alambileyo iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki. Isixhobo ngasinye, njengeBitmain S9 sidla umlambo oqhubekayo we-1400W wegesi.
Uninzi lweemigodi namhlanje luyenziwa yimisebenzi enkulu yamashishini. Indawo eyaziwayo kuyo imisebenzi e-Iceland. Urhulumente wase-Iceland uye waxwayisa ukuba baphumelela kwizixhobo zokutya ukugcina ukutya okungapheli kwamandla omsebenzi wokumbiwa kwemigodi. Enyanisweni, bathethe ukuba ukuba bavumele bonke abatyali-mali okanye inkampani efuna ukuqala loo msebenzi ukuba benze njalo, abayi kukwazi ngokupheleleyo ukuqhubeka kunye nemfuno.
Ngoko yintoni isisombululo kwi-conundrum yamandla okusetyenziswa kwamandla? I-PIVX ayisebenzisi imayini nhlobo. Kunoko, isebenzisa inguqu ephambili yezinto ezibizwa ngokuba yi-proof-of-stake. Ethetha ngokuthe ngqo, endaweni yokusebenza kwemigodi yamandla amakhulu, nabani na onokuthenga nokugcina iiyunithi ze-
PIVX, kwaye ufumane umvuzo ngokwenza njalo.
Kungenxa yokuba xa umsebenzisi ethatha i-PIV kwisikhwama se-intanethi, ikhomputer yabo iya kuhlala ihlala kunye nomnatha kunye nokuncedisa ukuthengiselana kunye nokuhlaziywa.
Nge-PIVX, iibhloko zivela njalo ngomzuzu. Kwinqanaba ngalinye, umvuzo we-cryptocurrency unikezelwa kumgcini wokuphumelela ophumeleleyo ophumeleleyo kwinqanaba le-lottery. Olu hlobo “lweemayini” lukhethwayo kwi-Bitcoin isitayela sokusebenza ngommbiwa ngenxa yokuba ayifuni amandla ngaphezu kokushiya ikhompyutha. Kwakhona akufuneki nayiphi na ixabiso lexabiso elibizayo (kwaye likhawulezileyo) eliqhelekileyo.
Ukukubeka ngokulula, i-PIVX ayisoze ibe neengxaki zamandla kuba ayiyi kufuna ngamandla amaninzi. Uqikelelo lubeka iimfuno zamandla kwintanethi yonke kwindawo ethile malunga nomoya omnye.
I-specma ye-Bitmain kunye nomntu osemva kwayo
AOlunye indawo eyaziwayo kwindawo enkulu yeBitcoin ukuchithwa kwemayini yiChina. Oku kungenxa yokuba ezininzi zeempahla zeemayini namhlanje zenziwa eChina. Kukho nemimandla emininzi kweli lizwe elinexabiso elincinci kunye neendleko zeziseko.
Inkulu yale mi sebenzi iqhutywa ngabenzi bezinto ezininzi zezinto zokumbiwa kweemayini, i-Bitmain. I-Bitmain ayikho kuphela eyenza i-hardware yezimayini eqhuba ubuninzi benethiwekhi, ibuye ifake iifama ze-mineral cavernous kunye namashumi amawaka oomatshini.
Ekuphenduleni oku, umnini-mlingani we-bitcoin.org kunye ne-bitcointalk.org eyaziwa njengeCøbra ikhuphe iphepheni echaza iinkxalabo zakhe ngokuphambili kwe-Bitcoin ukumbiwa kwezimayini, kunye neengozi ezivalelwa yi-Bitmain. Cøbra ubhala:
“Uninzi lwentsebenziswano lwenethiwekhi luqala ukugxila ezandleni zomntu oyedwa [Jihan Wu] kunye nenkampani yakhe [Bitmain]. Ukhuseleko lwenethiwekhi yethu luxhomekeka kubabenzi ngokufanelekileyo, kwaye sikulungele ukuphendula. Bafumana amandla ngakumbi ngosuku ngalunye. ”
Ngaphezu koko, uCøbra uxwayisa ngeendlela ezibonakalayo kwezopolitiko, esithi: “[I-Bitmain] isesikweni apho urhulumente waseTshayina angathatha izixhobo zawo ngasiphi na ixesha; into ayayiyiyenza ngokuqinisekileyo ukuba iB Bitcoin ikhula ngokwaneleyo ukuba ivumele ukuba isebenzise ukulawula kwayo i-hahrat ukuze iqhube i-ajenda ye-geopolitical agenda. ”
Ngenxa yendlela indlela iPIVX eyilwe ngayo, kunye neyonto yokuba ayifuni amawaka eikhomputha ezibiza ngexabiso lokuqhuba umnatha wayo, le nto ayiyi kwenzeka. Imodeli yoxwebhu-mboniso ithetha ukuba nabani na abanamathengi kwi-hardware kunye neeyunithi ezimbalwa ze-PIV banokuthatha inxaxheba kwinethiwekhi. Oku kukhokelela ekuhlaleni ngokubanzi, kunye nokuchasana ngakumbi nokuhlaselwa okuza kuxhomekeka kwinqanaba elinye lokungaphumeleli.
Nge-PIVX, akunakwenzeka ukuba umntu omnye okanye enye inkampani ilawulwe inethiwekhi. Oku kungenxa yokuba ukulawula intsebenziswano kuyakufuna ubuninzi benani lobuninzi phantse yonke into ekhoyo ye-PIV (malunga no-99% wokunikezela!) Kwaye oko akunakwenzeka.
Imayini ye-ASIC ikhokelela ekuphambili kwi-centralization
Kuzo ezo zixhobo zentlanzi (okanye i-unlucky) ngokwaneleyo ukuba ne-ASIC abavukuzi, ukugxininiswa kobungqina bokumbiwa kwemisebenzi kubonakala kungenakuphepha. Namhlanje, ukumbiwa kwemayini yeBitcoin kwenziwa ngokuthe ngqo kwiinkampani eziphambili. Ezi zixhobo ziquka imisebenzi emikhulu yokumbiwa kwemigodi, kunye namachibi okumbumbana okuqulunqa izixhobo zabasebenzi abaninzi beemigodi ezincinci zibe yimbutho eyodwa yokumba iimayini.
Nangona isihloko sokubambisana kweemigodi singaba nembambano kwabanye, kuyinyaniso elula ukuba into ephakathi kweyona nto iqala, kulula ukuyivala. Iinkonzo ezisekuhlaleni zikwasemngciphekweni wokuhlaselwa, njenge-classic attack of 51% eyenziwa yiingcali malunga neminyaka.
I-cryptocurrency eyaziwayo iDash ijongene nengozi ngoku. Ngokwe-pool operator operator P2Pool Mining, malunga ne-50% yazo zonke iibhloko kwi-Dash blockchain zigqitywa kwiziko elinye elilodwa elibizwa ngokuba yi-Bitmain. Nangona umboneleli wegumbi elumkileyo ulumkele ngolwimi lwawo, bacacisa ngokungenakuqinisekiswa ukuba uninzi lwamanethiwekhi amaninzi ombane ayenzeka kwindawo enye yingozi.
Kwi-P2Pool Mining statement, bacetyisa ukuba umcimbi waqala ukuphuhlisa kungekudala emva kokusungulwa kweBitmain, iDeras i-ASAS ichitshiweyo. Ngokukodwa, i-Antminer D3.
Ukupasa kwamanzi kungabangela ingxaki enjalo ukuba ezinye iinkcukacha zokubambisana neziqinisekiso zisebenza ngokunyamekela ekuqulunqeni iinqununu zabo ukuba zikhuseleke njenge-ASIC, okanye nanjengobungqina be-ASIC. Kodwa kunikwa inkuthazo eyaneleyo, kubonakala sengathi ii-ASIC zingaphuhliswa nakwiimali ezifunyenwe ukuba zixhathise.
I-Litecoin, umzekelo, yayilungiselelwe ukusebenzisa i-Scrypt algorithm ukwenzela ukuba i-Bitcoin ASIC ayinakuyenza yam. Nangona kunjalo, i-Bitmain ekugqibeleni yavelisa i-ASIC minerator, i-Antminer L3.
Xa kuziwa kwi-PIVX, nangona kunjalo, iyakwazi ukuphazamiseka kwezixhobo zokumbiwa kwe-ASIC. Kwakhona kubaluleke kakhulu ukuba i-51%. Ukuhlaselwa okunjalo kwi-PIVX kuya kufuna ukuba elinye iqumrhu lilawulwe phantse malunga ne-99% yenethiwekhi.
Ngoko oko kuthetha ukuthini? I-Cryptocurrencies njengeBitcoin, i-Litecoin, ne-Dash ibhekane nengxaki ekhulayo. Okokuba, ukunyusa iindleko zamandla kunye nokusetyenziswa, ukuphambili kwemigodi, kunye nenkampani enesondlo esiseduze phantse yonke i-ASIC yezixhobo zeemayini.
I-PIVX yadalwa ngeenjongo ezimbalwa engqondweni. Enye yeenjongo eziphambili phakathi kwabo kwakuyi-network yokwenza i-cryptocurrency yenethiwekhi eyayisasazwa ngokubanzi, ibekwe ngokusemthethweni, kwaye ngenxa yoko ikhuselekile ekuhlaselweni kunokwenzeka. Kunyaka ophelileyo, iqela le-PIVX liye longezelela ezinye iinkalo zobumfihlo. Oku kufaka phakathi kunye nezinye iimali zemfihlo, kwaye ngeendlela ezininzi zigqithise. Akunjalo kuphela, kodwa i-PIVX yiyo kuphela i-cryptocurrency namhlanje eneempawu zobunini obukhuselekileyo kunye nobunqabileyo, kunye ne-proof-of-stake-mining.
U-2018 uya kuba ngumnyaka omkhulu kwi-PIVX njengoko ezininzi iinkalo ezintsha zikhethiweyo ukuba ziphume. Ngelixa i-Bitcoin kunye nezinye i-cryptocurrencies zizama ukufumana isenzo kunye kunye nokuxazulula iingxaki zexesha elide, i-PIVX iya kutshatyalaliswa kuyo oko kuya kuba yinto ehamba phambili ye-cryptocurrency tech kwimarike.